Andao isika hampianatra ny Allversö - Church of God Switzerland iray manontolo
Iza moa izahay? > Ny ivon'ny WKG > Mampianatra ny fampihavanana rehetra ve isika?
Misy ny olona milaza fa ny teolojia momba ny Andriamanitra telo izay iray dia mampianatra universalism, izany hoe ny fiheverana ho voavonjy ny tsirairay. Satria tsy maninona na tsara na ratsy izy, mibebaha na tsia na nanaiky izy na nandà an'i Jesosy. Ka tsy misy afobe.
Misedra olana roa aho amin'ity fitakiana ity, izay tsy fitoviana.
Voalohany indrindra, ny finoana ny Trinite dia tsy mitaky ny hino ny fampihavanana rehetra. Ilay teôlôjia soisa malaza Karl Barth dia tsy nampianatra ny maha-universista, na ireo teolojiana Thomas F. Torrance sy James B. Torrance. Ao amin'ny Grace Communion International (WKG) dia mampianatra teolojia momba ny Trinite izahay, fa tsy ny fampihavanana rehetra. Ny tranokalanay Amerikana dia milaza izao manaraka izao momba izany: Ny Fampihavanana Maneran-tany dia ny fiheverana diso fa amin'ny faran'izao tontolo izao dia ho voavonjy amin'ny alalan'ny fahasoavan'Andriamanitra ny fanahin'ny olombelona rehetra, ny anjely ary ny demonia. Misy mihitsy aza ny universista milaza fa tsy ilaina ny fibebahana amin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy Kristy. Ny Universalista dia mandà ny fotopampianaran'ny Trinite ary maro ny olona mino ny fampihavanana maneran-tany no Unitarians.
Tsy misy fifandraisana voatery
Mifanohitra amin’ny fampihavanana maneran-tany, ny Baiboly dia mampianatra fa amin’ny alalan’i Jesoa Kristy ihany no hahazoana famonjena (Asan’ny Apostoly). 4,12). Amin'ny alalany, izay nofidin'Andriamanitra ho antsika, no nisafidianana ny olombelona rehetra. Amin’ny farany anefa, izany dia tsy midika fa ny olona rehetra dia hanaiky izany fanomezana avy amin’Andriamanitra izany. Irin’Andriamanitra hibebaka ny olona rehetra. Izy no namorona ny olombelona ary nanavotra azy ho amin’ny fifandraisana velona aminy amin’ny alalan’i Kristy. Tsy azo terena mihitsy ny tena fifandraisana!
Mino izahay fa tamin'ny alàlan'i Kristy dia namorona fahasoavana sy rariny ho an'ny olona rehetra Andriamanitra, na dia ireo izay tsy nino ny filazantsara aza mandra-pahafatiny. Na izany aza, ireo izay mandà an'Andriamanitra noho ny safidiny dia tsy voavonjy. Ireo mpamaky ny Baiboly mahatsiaro dia mahafantatra rehefa mandalina ny Baiboly fa tsy afaka manapa-kevitra isika fa amin'ny farany dia hibebaka ny rehetra ary noho izany dia hahazo ny vidin'ny fanavotan'Andriamanitra. Na izany aza, ireo andininy ao amin'ny Baiboly dia tsy azo ekena ary noho io antony io dia tsy diso hevitra momba an'io lohahevitra io isika.
Ny fahasahiranana hafa mipoitra dia izao:
Fa maninona no mety hitranga ny olona rehetra voavonjy? Na ny fivavahan'ny fiangonana tany am-boalohany aza dia tsy azo inoana fa mino ny afobe. Ny fanoharana ara-baiboly dia milaza ny lelafo, ny haizina tafahoatra, ny fikitrohazana ary ny nify miresaka. Izy ireo dia maneho ny toe-javatra mitranga rehefa very mandrakizay ny olona iray ary miaina ao anatin'ny tontolo iray mampisaraka ny tenany amin'ny manodidina azy, manolo-tena amin'ny fanirian'ny fony feno fitiavan-tena ary tonga saina ho loharanon'ny fitiavana, hatsaram-panahy ary ny fahamarinana rehetra mandà.
Raha maka an'ireto fanoharana ara-bakiteny ireto dia mampatahotra. Na izany aza dia tsy tokony raisina ara-bakiteny ny fampianarany, fa natao hanehoana endrika samihafa amin'ny lohahevitra iray fotsiny izy ireo. Na izany aza, amin'ny alalany dia afaka mahita fa ny helo, na misy izany na tsia, dia tsy toerana tokony hisy. Ny faniriana ny faniriana fatratra izay te ho voavonjy ny olona rehetra na ny zanak'olombelona ary tsy hisy olona hijaly ny fanaintainan'ny afobe dia tsy mahatonga azy ho mpamono olona.
Kristiana iza no tsy maniry ny hibebaka sy hiaina amin’ny fampihavanana feno famelan-keloka amin’Andriamanitra izay rehetra niaina hatramin’izay? Ny fiheverana fa ovain’ny Fanahy Masina ny olombelona rehetra ary hiara-hitoetra any an-danitra dia tena ilaina. Ary izany indrindra no tian’Andriamanitra! Tiany hiverina aminy ny olona rehetra ka tsy hizaka ny vokatry ny fandavana ny fitiavany. Maniry mafy izany Andriamanitra satria tia izao tontolo izao sy izay rehetra eo aminy Izy: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” (Jo. 3,16). Mampirisika antsika Andriamanitra mba ho tia ny fahavalontsika tahaka ny nitiavan’i Jesosy an’i Jodasy Iskariota, ilay namadika azy, tamin’ny Fanasana farany.3,1; 26) ary nanompo Azy teo amin’ny hazo fijaliana (Lioka 23,34) tia.
Mihidy ao anatiny?
Na izany aza, ny Baiboly dia tsy manome antoka fa hanaiky ny fitiavan'Andriamanitra ny olona rehetra. Mampitandrina aza izany fa azo atao ny misafidy ny hanaiky ny famelan-keloka avy amin'Andriamanitra sy ny famonjena sy ny fanekena miaraka aminy. Sarotra anefa ny mino fa hisy olona handray fanapahan-kevitra toy izany. Ary tsy takatry ny saina ihany ny hoe misy olona mandà hanome fifandraisana feno fitiavana amin'Andriamanitra. Ao amin'ny bokiny The Great Divorce, CS Lewis dia nanoritsoritra hoe: «Mino tokoa aho fa misy mpanohitra mahomby hatramin'ny farany; fa ny vavahadin'ny helo dia mihidy ao anatiny. »
Ny fanirian'Andriamanitra ho an'ny rehetra
Universalism dia tsy tokony ho diso hevitra amin'ny hoe universite sy universite amin'ny fahombiazan'ny zavatra nataon'i Kristy ho antsika. Ny olombelona rehetra dia voafidy amin'ny alalan'i Jesoa Kristy, ilay nofidin'Andriamanitra. Na dia tsy midika aza izany hoe afaka milaza isika fa ny olona rehetra amin'ny farany dia hanaiky io fanomezana avy amin'Andriamanitra io, afaka manantena azy io isika.
Nanoratra toy izao ny apostoly Petera: “Ny Tompo tsy mahela ny teny fikasana, araka izay ataon’ny sasany ho fahelany; fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba hahitan’ny olona rehetra fibebahana izy.”2. Petrus 3,9). Nataon’Andriamanitra izay rehetra azony natao mba hanafahana antsika amin’ny fampijalian’ny afobe.
Saingy amin'ny farany dia tsy hanitsakitsaka ny fanapahan-kevitr'ireo izay mandà ny fitiavany izy ary miala aminy. Satria raha tsy miraharaha ny eritreriny sy ny sitrapo ary ny fony izy dia tsy maintsy manaisotra ny maha-olombelona azy fa tsy namorona azy ireo. Raha nanao izany izy dia tsy hisy olona afaka manaiky ny fahasoavana sarobidy indrindra nomen'Andriamanitra - fiainana ao amin'i Jesoa Kristy. Namorona olombelona olombelona Andriamanitra ary namonjy azy ireo mba hananany fifandraisana marina aminy, ary tsy azo terena io fifandraisana io.
Tsy ny rehetra no tafaray amin'i Kristy
Tsy manjavozavo ny fanavahana ny mpino sy ny tsy mino ny Baiboly, ary tsy tokony ho isika koa. Rehefa milaza isika fa ny olona rehetra dia voavela heloka, voavonjy tamin’ny alalan’i Kristy, ary nampihavanina tamin’Andriamanitra, dia midika izany fa na dia an’i Kristy aza isika rehetra, dia tsy mbola ao anatin’ny fifandraisana Aminy avokoa. Na dia nampihavana ny olona rehetra taminy aza Andriamanitra, dia tsy mbola nanaiky izany fampihavanana izany ny olona rehetra. Izany no nilazan’ny apostoly Paoly hoe: “Fa Andriamanitra tao amin’i Kristy ka nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahotany ho azy, fa naoriny teo amintsika ny teny fampihavanana. Koa dia iraka solon'i Kristy izahay ankehitriny, satria Andriamanitra no mananatra amin'ny alalanay; koa noho i Kristy no angatahinay: mihavàna amin’Andriamanitra ianareo! (2. Korintiana 5,19-20). Noho izany dia tsy mitsara olona izahay, fa mampahafantatra azy ireo fa ny fampihavanana amin'Andriamanitra dia vita tamin'ny alalan'i Kristy ary azo atolotra ho an'ny rehetra.
Ny fiahiahiana antsika dia tokony ho fijoroana ho velona velona amin'ny alàlan'ny fizarana ireo fahamarinana ara-Baiboly momba ny toetran'Andriamanitra - ireo no eritreretiny sy fangorahany antsika olombelona - ao amin'ny tontolo iainantsika. Mampianatra ny fanjakan'i Kristy feno indrindra izahay ary manantena ny hihavanany amin'ny olona rehetra. Ny Baiboly dia milaza amintsika ny antony anirahan'Andriamanitra ny olona rehetra hanatona azy amin'ny fibebahana sy hanaiky ny famelan-keloka - faniriana mahatsapa.